nyowani mini-inotungamirwa ipad pro inodhura $ 699 kugadzirisa pasina applecare +
Kuru Nhau & Ongororo Nyowani mini-LED iPad Pro inodhura $ 699 kugadzirisa pasina AppleCare +
Nyowani mini-LED iPad Pro inodhura $ 699 kugadzirisa pasina AppleCare +
Kunze-kwe-garandi 12.9-inch iPad Pro 2021 inodhura $ 699 kugadzirisa pasina AppleCare +, maererano neyakagadziridzwa iPad Sevhisi uye Kugadzirisa chati yakaonekwa ne MacRumors .
Iyi i $ 50 yakawanda kupfuura mari yekugadzirisa yemhando yapfuura. Mari yekugadzirisa inofungidzirwa kuti yawedzera nekuti iyo yechishanu-chizvarwa 12.9-inch iPad Pro inoratidzira nyowani mini-LED-inofambiswa Liquid Retina XDR skrini.
Mari iyi inozoshanda kune zvinokuvara netsaona kunyangwe kana mudziyo uine risingasviki gore rekushandisa kana iwe usina AppleCare +. Kana paine nyaya nekuda kwekukanganisa kwekugadzira, ichafukidzwa neyekutanga-gore-garandi.
Mhosva hadzina kuchinja kune iyo nyowani 11-inch modhi iyo inochengeta Liquid Retina LCD skrini uye zvinoda $ 499 kugadzirisa pasina AppleCare's +. Pasi peAppleCare +, mari yebasa iri $ 49 yemamodeli ese ari maviri. Apple inobhadharisa $ 149 kwemakore maviri AppleCare e +. Kana iwe ukawana kunyoreswa kwe $ 7.99, inovhara hupenyu hwese hwechigadzirwa.
Zvimwe zvinoshamisa zve12,9-inch iPad Pro & apos; s mini-LED tech
Iyo mini-LED tech inopa rumwe ruzivo, zvirinani kusiyanisa zviyero, uye kupenya mavara, asi kune mamwe emabhizimusi-anobatanidzwa anobatanidzwa. Semuenzaniso, yagadzira iyo nyowani 12.9-inch iPad Pro zvishoma mukobvu, zvinoreva iyo yekutanga Magic Keyboard hausi kuzokwana kukwana uye iwe uchafanirwa kutora iyo nyowani inodhura $ 349. Mini-LED slate inotanga pa $ 1,099.
Mini-LED skrini dzakanyanya kunetseka kuburitsa pane LCD mapaneru uye izvi zvinotarisirwa kutungamira mukupa kushomeka. Dhirivhari inofungidzirwa yeiyo 12.9-inch modhi vave kutotsvedza muna Chikunguru. Iyo 11-inch musiyano ingangotanga kutumira kubva Chivabvu 21 . Mirairo yekutanga yakavhurwa muna Kubvumbi 30.
Mahwendefa matsva anofambiswa neM1 chip uye zvakare anouya mumhando dze5G. Vanonzwika seimwe yeiyo mahwendefa akanakisa we2021. Apple ndiyo kutarisira kudiwa kukuru yeiyo yazvino iPads.
maitiro ekudzosera tambo muJava
s8 vs s8 + hupenyu hwebhatiri
Virgin Mobile kutengesa pre-inodikanwa iPhone 7 uye 7 Plus kune yakaderera kunge $ 380
Samsung Galaxy S8 + vs Galaxy Cherechedzo 5
Samsung inopindura kuGPS S4 kushomeka kwekuchengetedza, inoti enda unotora kadhi re MicroSD
Pasi peArmor True Wireless Flash naJBL Ongororo
Samsung Galaxy S8 unboxing uye kutanga kutarisa